पानी कम हुँदा निम्तिन्छ यी १० समस्या - ज्ञानविज्ञान
केही खानेकुरा नखाई मानिस एक दुई दिन बाँच्न सक्छ। तर, पानी बिना भने प्राय असम्भव छ। पानी जीवन हो । यो हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अंश हो। शरिरको ७० प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ । रगत, माशंपेशी, हड्डी सबैमा पानी नभई हुँदैन । पसिना र पिसाबबाट हाम्रो शरिरको पानी जाने गर्छ।
१०. ओठ सुख्खा हुने तथा फुट्ने
Don't Miss it कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने २० सूत्र
Up Next के केरा र अण्डा संगै खादा मानिसको मुत्यु हुछ ?
खुर्सानी खादाका फाईदा र बेफाइदा के के हुन्, जानी राख्नुहोस
सामान्यतया चिल्लो र पिरो खानेकुरा नखान विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन् । चिल्लो तथा पिरो पेटमा समस्या आउने र अल्सर…
बच्चा जन्माउदा अप्रेशन गरेका महिलाले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? जान्नुहोस
१‍. अप्रेशन गरेको भोलिपल्ट अर्ध तरल पौष्टिक भोजन ग्रहण आग्रह गरिन्छ । चिल्लोयुक्त तरल पर्दाथ खानुहुँदैन । तेस्रो दिनदेखि आइरन…